Wasaaradda warfaafinta oo sheegtay in ay howlgalineyso boostada Soomaaliya – idalenews.com
Wasaaradda Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Gaadiidka ayaa maanta Faahfaahin ka bixisay halka ay mareyso howlaha dib loogu howlgalinayo Boostada Soomaaliya taas oo baahideeda si weyn ay u dareensayihiin shacabka Soomaaliyeed.
Mudane Ibraahiim Isaaq Yaroow wasiir kuxigeenka wasaaradda Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Gaadiidka oo ay lasocdeen agaasimayaasha waaxyaha Boostada iyo Isgaarsiinta ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta Boostada ee degmada Boondheere waxa uuna kusoo wareegay wasiir kuxigeenku qeybaha waaxda Boostada ee wasaaradda warfaafinta.
Markii ay kormeerkoodi soo dhameysteen wasiir ku xigeenka iyo mas’uuliyiinti lasocotay ayey warbaahinta la hadleen, ugu horeyna agaasimaha waaxda Boostada ee wasaarada Abuukar Maxamed Coosey ayaa sheegay in ay jirto baahi dhinaca qalabka iyo tayeenta shaqaalaha si si dag dag ah ay ugu howlgalaan.
Siihaya xilka wasiirnimo ee wasaaradda Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Ibraahim Isxaaq ayaa tilmaamay in xukuumadu ay si dag dag ah wax uga qaban doonto baahyida qalab ee xarunta Boostada isagoo wasiirku carabka ku adkeeyay in ay howlgali doonto xarunti Boostada ee wasaaradda bisha February ee sanadkan.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa baahi weyn u qabo soo nooleynta adeegyadi boostada ee dalka hadii ay suurto gasho hirgalinteedana waxaa meesha ka baxi doonto baahidi ay dadka u qabeen adeegi boostada iyadoo masuuliyiinta wasaaraduna ay sheegeen in dhawaan la hirgalin doono.